3 Cách ủ Phân hữu cơ tại nhà CỰC đơn giản không mùi khó chịu | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: 3 Cách ủ Phân hữu cơ tại nhà CỰC đơn giản không mùi khó chịu | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Namhlanje, ndingathanda ukukhokela Indlela yokwenza isichumiso esivela ekhitshini inkunkuma? icocekile, ayinavumba, ixesha lokufukamela elikhawulezayo. Eli nqaku lihlanganiswe kwiividiyo kwitshaneli yakhe yeYouTube Quoc Thinh Le. Kumema ukuba uthethe!
1 Indlela yokwenza isichumiso esivela ekhitshini inkunkuma
1.1 1. Izithako
1.2 2. Ukwenza njani
1.3 3. Indlela yokuchumisa?
2 Indlela yokwenza umgquba we-2-in-1 ye-organic fertilizer ngelixa udibanisa kunye nokufaka isichumisi kwinkunkuma yasekhitshini
2.1 1. Izithako
2.2 2. Ukwenza njani
3 Indlela yokwenza umquba ovela kwiibhanana, amaqanda, ubisi kunye nentlanzi ekhaya
3.1 1. Izithako
3.2 2. Ukwenza njani
3.3 3. Indlela yokuchumisa?
Indlela yokwenza isichumiso esivela ekhitshini inkunkuma
Iindidi zenkunkuma yekhitshi ephilayo: imifuno eluhlaza, amaxolo eziqhamo, amaqokobhe amaqanda, amaqokobhe embewu…;
Iswekile esulungekisiweyo (iswekile yommoba, iswekile egaqayo, iswekile ebomvu) okanye iswekile yokupheka: 1kg;
I-Styrofoam okanye ibhakethi (ibhakethi ejikelezayo): iilitha ezingama-25;
IiProbiotics i-Emzeo kunye ne-Emic;
Amanzi: iilitha ezili-10.
2. Ukwenza njani
Beka iilitha ezili-10 zamanzi e-emeleni.
Gcoba i-sugar granulated ibe ngamaqhekeza amancinci, chitha kwiilitha ezili-10 zamanzi.
Yongeza isiqingatha sepakethi ye-Emzeo ukunceda ukubola kunye nokutshabalalisa inkunkuma ephilayo.
Yongeza isiqingatha sepakethi ye-Emic ukunceda ukophula inkunkuma ngokukhawuleza, okanye ipakethe yonke ngokukhawuleza.
Faka i-3kg yenkunkuma yasekhitshini. Ukuba ngaphezulu kwe-3kg, yongeza amanzi kunye neswekile, ukuba ingaphantsi kwe-3kg, yongeza amanzi amancinci kunye neswekile.
Ukusabalalisa ngokulinganayo kwaye ucinezele phantsi, uvumele inkunkuma ifunxe amanzi.
Emva koko sebenzisa isiciko sebhokisi ye-styrofoam ukuyigubungela, kwaye uyigubungele ngamatye okanye izitena ukukhusela inambuzane ukuba ingangeni. Gcina kwindawo emnyama ukuze ufukame, ungabonakali ngokupheleleyo kukukhanya kwelanga.
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, ukuba kukho inkunkuma eninzi, yongeza, yongeza inani elifanelekileyo lamanzi + umxube we-Emzeo + Emic.
Umgqomo ngamnye ozilitha ezingama-25 we-styrofoam unokuvundisa ukuya kuthi ga kwi-6 kg yenkunkuma yasekhitshini.
Ixesha lokufukamela limalunga neentsuku ezingama-25 ukuze sikwazi ukuchumisa isityalo. Ingenziwa mfutshane ibe yintsuku ezili-15 ngokucoca umxube wenkunkuma phambi kokufukanyelwa, kodwa kufuneka igcine ulusu lweziqhamo lusitsha ukuze lungacoceki xa lusila, ngokuligquma efrijini ukuze lilugcine.
Ingqalelo: Kuyimfuneko ukukhulula umphunga owenziwe kumgquba ukuba uvundiswe ngendlela ecocekileyo kwisikhongozeli esingangeni moya. Eyona ndlela ilula kukubetha umngxuma omncinci emzimbeni kufuphi nomlomo webhotile, ubeke ibhola yekotoni kuyo, uthathe i-masking tape, kodwa ushiye i-cotton encinci evulekileyo ukuze ubaleke umphunga.
3. Indlela yokuchumisa?
Sebenzisa isisefu ukuhluza intsalela, xuba i-30-60ml yesichumiso kunye ne-10 yeelitha zamanzi, unkcenkceshele ngokuthe ngqo emthini, kwaye intsalela ibeke emhlabeni malunga nesiseko somthi. Ukuba ufaka isicelo ngokuthe ngqo, akukho mfuneko yokucoca, injongo yokusebenzisa i-sieve kukuphepha ukuvala i-hose yokunkcenkceshela.
Inokuxutywa nezinye izichumisi eziphilayo ezifana nomgquba wobisi, ijusi yebhanana okanye i-banana GE ukwandisa ukusebenza kakuhle.
Faka isicelo se-1-2 ngexesha ngalinye emva kwemini epholileyo. Faka ingcambu yezityalo kwiimbiza, ingcambu nganye yi-100-200ml.
Indlela yokwenza umgquba we-2-in-1 ye-organic fertilizer ngelixa udibanisa kunye nokufaka isichumisi kwinkunkuma yasekhitshini
Le ndlela yokwenza umgquba inenzuzo yokuba icocekile kwaye icoceke, ayinavumba kwaphela, ilungele ukusebenza kwiindawo zokuhlala okanye kwizixeko ezikhulu; Kulula ukwenza; Inkunkuma yasekhitshini ibola ngokukhawuleza.
Kwelinye icala, ukuvundisa kunye nesichumiso esi-2 kwisi-1, akuthathi xesha ukuchumisa, kodwa isityalo sisebenzisa izondlo ngokucothayo.
Iintlobo zenkunkuma yezinto eziphilayo ezivela ekhitshini;
Iibhotile zeplastiki (iibhotile zamanzi okusela, iibhotile zeplastiki, iimbiza zezityalo …) kunye nomthamo ofanelekileyo ubungakanani benkunkuma kunye nohlobo lwezityalo;
I-Emuniv compost powder okanye umngundo ochasayo.
Sika iikona ezi-4 zomzantsi webhotile yeplastiki.
Kwiibhotile zamanzi okusela, sinqumle inxalenye ephezulu ukwenza isiciko sebhotile.
Kwiibhotile zeplastiki, kunzima ngakumbi ukuyila i-cap, emva koko uyigubungele ngesikhwama seplastiki kwaye uyilungise nge-band elastic.
Yomba umhlaba ecaleni kwesityalo, ngokwaneleyo ukugquma umzantsi wembiza. Beka ingqayi kuyo kwaye uvale imbiza ngomhlaba.
Beka ibhodwe ukwenzela ukuba i-bottom cut cut is closest to roots ukuvumela ukuba bakhule ngaphakathi, bathabathe zombini i-residu yekhitshi kunye ne-seepage.
Umgubo womgquba unesiphumo sokubulala iintsholongwane, ukukhawulezisa ukubola kwenkunkuma ephilayo ukuze izityalo zifunxe, ukubonelela ngemicroorganisms eziluncedo emhlabeni, ukuxhathisa izifo zokungunda kunye nokuthintela izifo zengcambu.
Gafa umgubo we-compost ezantsi kwejagi, injongo kukunyanga i-leachate evela kwinkunkuma ephilayo.
Faka umaleko wenkunkuma, yonke i-5cm yenkunkuma efafazwe ngomgubo womgquba. Ekugqibeleni ufefe umaleko obhityileyo womgubo we-compost ngaphezulu.
Kwiintsuku ezilandelayo, xa kukho inkunkuma eninzi, qhubeka udibanisa kwaye ufefe umgubo ofanayo womgquba kuqala.
Vala isiciko, gubungela ngesikhwama seplastiki esimnyama ukwenza isithunzi sokunceda i-microorganisms kwi-compost ikhule.
Kwiindawo ezinomoya, sebenzisa izitena okanye amatye ukugquma ukunqanda iingxowa zeplastiki ezibhabhayo.
Le ndlela ayitshisi iingcambu, ngoko unokuqiniseka. Kusenokubakho iimpethu embizeni yokwenziwa komgquba, kodwa azisayi kusonakalisa isityalo.
Le ndlela yokwenza umgquba isetyenziswa kwizityalo ezifakwe embizeni okanye kwizityalo ezikhuliswe ngomlinganiselo omncinci, zilungele indawo okanye indawo enemozulu epholileyo. Ngokuphathelele imifuno efana ne-lettuce, iklabishi, njl., sebenzisa indlela yokudibanisa ekuqaleni kwenqaku okanye umquba owenziwe kwiibhanana, i-caviar, kwaye ndiya kubelana nabo kamva.
Indlela yokwenza umquba ovela kwiibhanana, amaqanda, ubisi kunye nentlanzi ekhaya
Le ndlela isebenza kwizityalo ezikhula kwindawo emxinwa, ekufuneka zinike izondlo ngamaxesha ukuphuhlisa izondlo ezaneleyo.
2-3 iibhanana ezivuthiweyo, amaqanda ama-2, ipakethe e-1 yobisi olutsha okanye i-200g yobisi olungumgubo (i-600g iyonke);
Intlanzi (umzimba, intloko, amathumbu): 400g;
I-Molasses: 1 ilitha;
I-orange peel kunye nepinapple;
Itoti yebhiya yalo naluphi na uhlobo ilungile;
Uhlobo lwe-compost ye-Emuniv 200g;
Isikhongozeli seelitha ezi-5.
Qala unqumle ibhanana ibe ngamaqhekeza amancinci.
Emva koko, yongeza amaqanda ama-2, kuquka iigobolondo.
Yongeza i-1 ilitha ye-molasses.
Yongeza i-orenji enqunqwe kakuhle kwi-rind ye-flavour.
Yongeza isiqingatha sephayinaphu esinqunqiweyo.
Faka kwitoti enye yebhiya.
Yongeza kwisiqingatha sepakethe ye-compost powder (elingana ne-100g) okanye ezinye iimveliso zomgquba wokusetyenziswa ngokulinganayo.
Yongeza i-400g yentlanzi.
Ekugqibeleni, yongeza amanzi. Sebenzisa amanzi okusela, ukuba ngamanzi epompo, kufuneka ashiywe emoyeni usuku olu-1 ukuze asuse i-chlorine.
Shiya isithuba kwitanki, ungayigcwalisi ngamanzi.
Sebenzisa intonga encinci ukuvuselela umxube, ukugubungela kwaye uhlambulule ngaphandle kwengqayi.
Ngethuba lenkqubo yokufakelwa, i-steam eninzi iya kuveliswa ukunweba i-jar, kukho iindlela ezi-2 zokukhulula umphunga. Indlela yokuqala kukusebenzisa ibhaluni ukuvala umlomo webhotile, ubophe i-elastic band emlonyeni.
Indlela yesi-2 kukusika umngxuma omncinci kwisitya, ubeke uboya bekotoni kunye ne-tape, khumbula ukushiya i-cotton encinci ukuze ibe nendawo yokubalekela.
Thatha ingxowa yeplastiki emnyama ukugquma imbiza yokwenza umgquba ukwenza isithunzi ukunceda iintsholongwane zikhule kakuhle. Musa ukubeka kwindawo ekukhanyeni kwelanga.
Ixesha lokufukamela liziiveki ezi-2 ubuncinci ukuze ukwazi ukukhupha isichumiso, ngokuqhelekileyo iiveki ezi-3-4 zezona zingcono.
Umfanekiso ongezantsi ngumphumo wokudibanisa kwi-barrel kwi-banana caviar emva kweeveki ezi-2, i-probiotic layer ikhula kakuhle kwaye igcwele phezu komhlaba.
Ukuba imveliso yotywala ayinayo iphunga elibi, uphumelele.
Ngaphambi kokuchumisa, kuyimfuneko ukuvuselela kakuhle, xuba umlinganiselo we-50ml yesichumisi kunye ne-10 ilitha zamanzi.
Gcoba amaxesha angama-1-2 ngeveki emva kwemini epholileyo.
Xa usebenzisa ibhotile yokutshiza, sebenzisa isisefo kunye netawuli ukucoca intsalela. Xuba i-10ml yomgquba ne-1 ilitha yamanzi.
Qaphela: Kwimifuno enamagqabi amancinci afana ne-collard greens, kuyimfuneko ukuyinkcenkceshela kusasa ngentsasa elandelayo ukuphepha ukutshisa amagqabi.
Ngaphezulu sisikhokelo sam sonke ku-cidyokhwe yomgquba ekhaya ukusuka ekhitshini inkunkuma ilula kakhulu, ngokukhawuleza kwaye ayibangeli ukuvumba. Ndiyathemba ukuba inqaku liluncedo kubafundi!
Umthombo: Eli nqaku liqulunqwe kwitshaneli ye-Youtube Quoc Thinh Lebafundi nceda undwendwele itshaneli yakhe kwizifundo zevidiyo!
Cách nhân giống lan phi điệp & kỹ thuật ươm ki “hiệu quả” | Hatgiongtihon.net